Isiqendu selizwe laseBasque
Izwe laseBasque - I-Geographic and Anthropologic Enigma
Abantu baseBasque baye bahlala ezintabeni zePyrenees ezintabeni eziseBay yaseBiscay enyakatho yeSpeyin nasezantsi kweFransi iminyaka eyiwaka. Ziyindawo endala kakhulu ehlala eYurophu. Kunomdla, nangona kunjalo, ukuba abaphengululi abazange baqaphele imvelaphi eyiyo yeBasques. I-Basques ingaba yinzala ngqo yabasundu abaqokeleli be-Cro-Magnon ababehlala eYurophu malunga neminyaka engama-35 000 edlulileyo.
I-Basque iye yaphumelela, nangona ulwimi lwabo oluhlukeneyo kunye nenkcubeko bekunjalo ngezinye iinkxalabo, bebangela ukunyuka kwezobudlova.
Imbali yamandulo yeBasques
Iimbali ezininzi zaseBasque zisenakuqinisekiswa kakhulu. Ngenxa yokufaniswa kwamagama kunye namagama abo, iBasques inokuthi idibene nabantu ababizwa ngokuthi yiVascones abahlala eNyakatho yeSpain. AmaBasque afumana igama lawo kwesi sizwe. Abantu baseBasque mhlawumbi behlala behlala kumaPyrenees ngamawaka eminyaka xa amaRoma ahlasela ipenesi yase-Iberia malunga nonyaka wenkulungwane yokuqala.
Imbali ephakathi yeBasque
AmaRoma ayenomdla wokunqoba insimu yaseBasque ngenxa yeentaba, indawo engabonakaliyo. Ngokwengxenye ngenxa yokukhuselwa kwamaPyrenees, amaBasque awazange atshaywe nguMoor, iVisigoth, i-Normans, okanye i-Franks. Nangona kunjalo, imikhosi yaseCastilian (yaseSpeyin) yawunqoba intsimi yaseBasque kuma-1500s, kodwa i-Basques inikwe ubungakanani obukhulu bokuzimela.
ISpeyin neFransi baqalisa ukunyanzelisa abaseBasque ukuba bajonge, kwaye iBasques yalahlekelwa ngamalungelo awo ngexesha leeNqwelo zeCarlist zangekhulu le-19. Ubuzwe besiBasque bube bukhulu ngakumbi ngeli xesha.
Ukuxhatshazwa eBasque Ngexesha leMfazwe yaseMzansi yaseSpeyin
Isithethe saseBasque sihlupheke kakhulu ngexesha leMfazwe yombutho yaseSpain ngowe-1930.
UFrancoco Franco kunye neqela lakhe le-fascist bafuna ukukrazula iSpain yonke i-heterogeneity. Abantu baseBasque bajoliswe ngokukhawuleza. UFranco wayevalile ukuthetha iSasque. AmaBasques alahlekelwa ukuzimela kwezopolitiko kunye namalungelo ezoqoqosho. AbaseBasque abaninzi baboshwa okanye babulawa. UFranco wayala idolophu yaseBasque, eGuernica, ukuba ibhobhozwe ngamaJamani ngo-1937. U-Picasso wambesa igama lakhe elidumileyo elithi " Guernica " ukuze abonise ukwethuka kwemfazwe. Xa uFranco efa ngo-1975, iBasque yafumana ukuzimela kwayo kwakhona, kodwa oku akuzange kwanelise yonke iBasque.
Ngomnyaka we-1959, ezinye zeentlanga ezigqithisileyo zakha i-ETA, okanye i-Euskadi Ta Askatasuna, i-Basque Homeland kunye noKhululwa. Le ntlukwano, inhlangano yentlalo-ntlalo iye yaqhuba imisebenzi yeentlanga ukuze izame ukushiya eSpeyin naseFransi ize ibe yintlanga- ezizimeleyo . Abantu abangaphezu kwe-800, kubandakanywa namapolisa, iinkokheli zorhulumente, kunye nabantu abamsulwa babulawa ngokubulawa kwabantu kunye nokuqhunyiswa kwamabhobho. Amawaka amaninzi akalimele, athunjwa, okanye aphangiwe. Kodwa iSpeyin neFransi azizange zinyamezele lo bulugonyamelo, kwaye amaninzi amaphekula aseBasque aye afakwa. Iinqununu ze-ETA ziye zatsho amaxesha amaninzi ukuba zifuna ukuvakalisa ukuphela komlilo kunye nokucombulula ulawulo lukhuphe uxolo, kodwa luye lwaphulukana nokupheliswa komlilo ngokuphindaphindiweyo.
Uninzi lwabantu baseBasque aluvumelani nezenzo zobundlobongela be-ETA, kwaye akuwona onke amaBasque afuna ulawulo olupheleleyo.
IJografi yelizwe laseBasque
IiNtaba zePyrenees ziyinxalenye enkulu yelizwe laseBasque (imephu). Ummandla waseBasque Autonomous eSpeyin uhlukaniswe ngamaphondo amathathu - i-Araba, i-Bizkaia, kunye neGipuzkoa. Inkunzi kunye nekhaya lePalamente yaseBasque yiVitoria-Gasteiz. Ezinye izixeko ezinkulu ziquka iBilbao neSan Sebastian. EFransi, iBasques ihlala kufuphi neBiarritz. Izwe laseBasque linyuka kakhulu. Imveliso yamandla ibalulekile. Ezopolitiko, i-Basques eSpeyin inegunya lokuzimela okukhulu. Zilawula amandla amapolisa, ishishini, ezolimo, irhafu, kunye neendaba. Nangona kunjalo, ilizwe laseBasque alikabi limele.
IsiBasque - uLwimi lwe-Euskara
Ulwimi lwaseBasque alukho i-Indo-European.
Kukwahlukana kolwimi. Iilwimi ziye zazama ukuxhuma iBasque ngeelwimi ezithethwa eNyakatho Afrika naseNtabeni zeCaucasus, kodwa akukho nxu lumano oluye lwaboniswa. IsiBasque sibhalwa ngegama lesiLatini. AmaBasque abiza ulwimi lwabo u-Euskara. Kuthetha ngabantu abangaba ngu-650,000 eSpain kunye nabantu abangama-130 000 eFransi. Iintetho ezininzi zaseBasque zizimbini ngeSpanish okanye ngesiFrentshi. IsiBasque sabuya kubuya emva kokufa kukaFranco, kwaye ngoku kubalulekile ukwazi iBaseque ukuba ifumane imisebenzi karhulumente kuloo mmandla. IsiBasque ekugqibeleni sibonwa njengelwimi olufanelekileyo lwemfundo kwizibonelelo zemfundo.
Inkcubeko yaseBasque kunye neGenetics
Abantu baseBasque bayaziwa ngenxa yenkcubeko yabo nemisebenzi yabo. I-Basques yakha iinqanawa ezininzi kwaye yayingabanqabileyo. Emva kokuba u- Ferdinand Magellan abulawe ngowe-1521, indoda yaseBasque, uJuan Sebastian Elcano, yagqiba ukujikeleza kokuqala kwehlabathi. USt. Ignatius waseLoyola, umsunguli we-Jesuit umyalelo wabafundisi bamaKatolika, wayengumBasque. UMiguel Indurain uzuze iToux de France kaninzi. I-Basque idlala imidlalo efana nebhola lebhola, ibhola yombhoxo kunye ne-jai alai. Ininzi iBasque namhlanje iRoma yamaRoma. I-Basques ipheka izitya ezidumileyo zaselwandle kunye nokubhiyozela imikhosi emininzi. I-Basques ingaba ne-genetics ekhethekileyo. Banobuninzi beendawo eziphezulu zabantu abanegazi lohlobo lwe-O negazi leRhesus Negative, ezinokubangela iingxaki ngokukhulelwa.
Kukho abantu abayizigidi ezili-18 baseNtshonalanga yaseBasque emhlabeni jikelele.
Abantu abaninzi eNew Brunswick naseNewfoundland, eCanada, bavela kubadobi beBasque nakwi-whalers. Abaninzi abafundisi beBasque abasemagunyeni kunye namagosa karhulumente bathunyelwa kwiLizwe elitsha. Namhlanje, malunga nabantu abayizigidi ezili-8 baseArgentina, eChile naseMexico bafumana iingcambu zabo kwiBasque, abafudukela emsebenzini ukuba babe ngabalusi, abalimi kunye nabavukuzi. Kukho abantu abangama-60,000 baseBasque okhokho base-United States. Abaninzi bahlala eBoise, Idaho, nakwezinye iindawo zaseMelika yaseNtshona. IYunivesithi yaseNevada eReno ineSebe leZifundo zaseBasque.
Iimfihlakalo zaseBasque Zininzi
Ekugqibeleni, abantu baseBasque abayimfihlakalo baye basinda kumawaka eminyaka kwiiNtaba zasePyrenees ezikude, balondoloze ubuhlanga babo neelwimi zabo. Mhlawumbi ngelinye ilanga abaphengululi baya kugqiba imvelaphi yabo, kodwa le nqaku yendawo ihlala ingaphendulwanga.
Lezi Toys ezingabonakaliyo zeToys ziyiNgqangi
Top 10 Panic! Kwiingoma zeDisco
Indlela yokucoca i-Gun
I-Air Element - Eninzi okanye Encane kakhulu
IJeannette Rankin Quotes
Ukudlala njani umdlalo weMiami Scramble Tournament
Index of Step-by-Step, Izifundo zeTeat-Based Based Lessons